गोर्खाली साहस यस्तो पो ! ७ महिनामा १४ अग्ला हिमाल चढ्ने तयारी | We Nepali
गोर्खाली साहस यस्तो पो ! ७ महिनामा १४ अग्ला हिमाल चढ्ने तयारी
२०७५ माघ २१ गते २३:२२
लन्डन । एकजना ब्रिटिश गोर्खा निर्मल ‘निम्स’ पूर्जा एमबीइको महत्वकांक्षाले यतिखेर सबैको ध्यान आकृष्ट भएको छ । त्यो के भने उनी यसै वर्ष सन् २०१९ को ७ महिनाभित्र ८ हजार मिटर उचाईंका सबै १४ हिमाल चढ्ने सुरमा छन् । उनी आफ्नो योजनामा सफल भए यसले यसअघिको ७ वर्ष, ११ महिना १४ दिनको कीर्तिमान तोड्नेछ ।
पूर्जाको प्रोजेक्ट १४/७ ‘द पावर अफ पोसिबल’ नेपालका च्यारिटी संस्थाहरु माइण्डफुलनेस च्यारिटीज् र नेपाल युथ फाउण्डेशनको सहयोगार्थ तय भएको हो । सैनिक पृष्ठभूमिका पूर्जाले आफ्ना साथी, सहकर्मीहरु सेवामा रहंदा वा अवकासपछि मानसिक तनाव र रोगबाट ग्रसित भएको देखेका छन् । उनी सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोणको महत्वबारे जनचेतना जगाउने आफ्नो प्रोजेक्टको उद्देश्य रहेको बताउंछन् ।
पूर्जाको यो महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट एकदम खर्चिलो छ । उनलाई प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न कम्तीमा ७ लाख ५० हजार पाउण्ड आवश्यक छ । उनले आफ्नो योजनामा सघाउन अपिल गर्दै गोफण्डमी पेजमार्फत आर्थिक सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । गोफण्डमीमार्फत ७५ हजार पाउण्ड उठाउने प्रयासमा छन् उनी जसले उनको दोश्रो चरणको मिसन केटु, नांगा पर्वत र ब्रोड पिक पाकिस्तानको आरोहण खर्च कभर गर्छ । बेलायतको नेपाली डायस्पोरा जुट्यो भने उनको योजनाले सार्थकता पाउनेछ अनि नेपाल र नेपालीको नाम एकपटक फेरि उंचो हुनेछ उनले चढ्न आंटेका हिमालहरु जत्रै ।
उनलाई धेरैले ‘निम्स’ भनेर चिन्छन् । उनी सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्ने पहिलो गोर्खा पनि हुन् । उनको नाममा आरोहणका कयौं विश्व कीर्तिमान् छन् । उनले सगरमाथा देखि लोत्से आरोहण जम्मा दश घण्टा १५ मिनेटमै सम्पन्न गरे जुन यसअघि २० घण्टाको रेकर्ड थियो । ५ दिनमै सगरमाथा, लोत्से र मकालु (जो ८ हजार मिटर भन्दा अग्ला छन्) चढे । १७ दिनमा सगरमाथा दुई पटक, लोत्से र मकालु एक एकपटक चढ्ने उनी पहिलो व्यक्ति हुन् ।
उनले अग्ला हिमाल चढेरै यस वर्ष ‘एमबीइ’ जस्तो साहसिक मिलिट्री अवार्ड पनि पाए । उनले सगरमाथा चढ्ने क्रममा कठ्यांग्रिएर मृत्युको काखमा पुगेका एकजना भारतीय आरोहीलाई बचाएका थिए । जि २०० इ गोर्खा एक्सपिडिसनमा १३ गोर्खाहरुलाई सगरमाथा लैजान उनले नै नेतृत्व गरेका थिए । उनका सफलताका कथा धेरै छन् । सैनिक पृष्ठभूमिले धेरै खुल्न नमिल्ने भएकाले कतिपय कुरा सार्वजनिक भएका छैनन् ।
उनी दृढता र सकारात्मक सोचले जीवनमा हरेक कुरा सम्भव छ भन्ने ठान्छन् ।
उनलाई सहयोग गर्न-